ऐनामा हेरेर अनुहार मिलाउने नक्कले चरा ! :: NepalPlus
ऐनामा हेरेर अनुहार मिलाउने नक्कले चरा !
नेपालप्लस संवाददाता२०७८ भदौ २२ गते १७:१६
मान्छेहरु आआफ्ना तालमा थिए । बैज्ञानिकहरुले भने निकै ठूलो हातलागि होला भनेर उत्सुकतापूर्वक नियालीहरेका थिए । यो कोकले चरो ( यूरोपियन मेगपाइ भनिन्छ अंग्रेजीमा) भुरुर्र उडेर ऐनाको छेउमा आयो । यतौति हेर्‍यो कसैले देख्लाकि झैं । अनि उसले अनुहार हेर्यो ऐनामा । घाँटीको कालो भुत्लामा पहेंलो धब्बा देख्यो । झन नियाल्यो, मान्छेले दारी काटिसकेपछि कतै केहि रौं छुटेको बेला झैं । हामीले बाँकि रौं उखलेझैं कोकलेलेपनि उखल्यो । उसले चिन्यो, ए मेरो अनुहारमा त पहिले यस्तो पहेंलो दाग थिएन ।
बैज्ञानिक न परे, यो देखेर चित खाए । चरालाईपनि कति नक्कली हुनु परेको ? चरा वा स्तनधारी जिव बाहेक अन्य जिवले ऐना हेरेर यसरि जिल्ल परेको, नक्कल पारेको देखिएको यो पहिलो पटक हो ।
ऐनामा हेर्नु आफू कस्तो छु, कस्तो भएँ भनेर आफूले आफ्नै मूल्यांकन गर्ने, सचेत रहने एक माध्यम हो । बैज्ञानिकको भाषामा यस्तो गर्नु स्नायुसित संवन्धित एक उच्च दक्षतासित संबन्धित कुरो हो । बैज्ञानिकहरुले यसरि थुप्रै जिवजन्तुलाई ऐनामा लगेर देखाउँदा तिनले प्राय प्रतिद्वन्दि ठान्ने गर्थे यस अघि । आक्रमण गर्थे शत्रु ठानेर । हात्ती, सोंस (डल्फिन) र केहि बाँदरका प्रजातीमा यस्तो परिक्षण गरेका थिए । यो परिक्षणको सकारात्मक प्रतिक्रिया (हेरेर रमाउने, जिल्ल पर्ने) अब बाँदर जातिमा मात्रै सिमित नरही चरामापनि लागू भएको दाबी गरेका छन् यो खोज सार्वजनिक गर्ने जर्मनीको फ्र्यांकफर्टस्थित गोथे विश्वबिध्यालयका हेल्मुट प्रियोरले ।
हात्ती, बाँदर र सोंस त एकदम सामाजिक प्राणी हुन् । यी सामाजिक समूहमा बसेर अनेक नियम पालना गर्छन् । तर चरा ? कोकले, भोटे काग (रेभन) र ठेउवा (जे) पनि सामाजिक समूह बनएर बस्ने भएकोले त्यसो भएको हुन सक्ने तर्क गरेका छन् ।
कसरि पत्ता लगाए त यो ? पिरोर र उनको अनुसन्धान टोलीले दुई वटा फरक पिँजडा बनाए र पाँच वटा कोकले छोडिदिए । एउटा कोठामा ऐना थियो । अर्कोमा थिएन । ति मध्ये तिन वटाले अधिकांश समय ऐना भएको कोठामा बिताए । ति नजिक जान्थे । हेर्थे । पछाडी फर्किन्थे र हेर्थे । कसरि चल्छ, कसरि काम गर्छ नियाल्थे । अगाडि बढ्थे र फेरि पछाडी हट्थे । आफ्नो शरिरको भुत्लालाई अनेक कोणबाट ऐनामा हेर्थे ।
त्यसपछि ति बैज्ञानिकले फेरि रातो, पहेंलो वा कालो रङ घसिदिए ठोंडको मुन्तिरको भुत्लामा । अनि राखिदिए ऐना भएको पिँजडामा । कालो किन राखिएको भने चराको बाँकि भागको रङ कालो हुनाले त्योसित मेल खाओस् भन्ने उनीहरुको उद्देश्य हो । प्लस बायोलोजी पत्रीकाका अनुसार पछि ति चराले त्यो धब्बा ऐनामा हेरिहेरि कोतरेर मिल्काए । तर चराहरुलाई ऐना नभएको पिंजडामा राखिदिँदा ? ति धब्बाहरुमा छुँदापनि छोएनन् । वास्तै गरेनन् । दुई वटा चराले भने पूर्व जानकारी भएझैं गरे । कोकले चरा एकदम उत्सुक र वरिपरि कता के के हुन्छ नियाल्ने चरामा पर्छन् ।
यो अनुसन्धानबाट बैज्ञानिकहरुले चराहरुपनि ऐनामा रमाउने, आफ्नो शरिरको सुन्दरताका बारेमा देखाउन र रमाउन चाहने रहेछन् भन्ने पत्तो पाए । चराका पूर्खा र स्तनधारी जिव करिब १० करोड